ဂျူလိုင်လအတွက် စိတ်ကူးအိပ်မက် အစီအစဉ်
ခါတိုင်းလိုပဲ လအသစ်အစမှာ "စိတ်ကူးအိပ်မက်များအမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်လာပြီ" ပရိုမိုးရှင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကြေငြာလိုက်ပါသည်။!
ဘာပြိုင်ပွဲပါလဲ ဘာကြောင့်ဝင်ပြိုင်သင့်တာပါလဲ? စိတ်ကူးအိပ်မက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းဟာ ဖောက်သည်တော်တွေရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် FBSမှစီစဉ်ပေးထားတဲ့ ဘယ်နေရာမှာမှမတွေ့နိုင်သေးတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်. စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ ထရိတ်ဒါတွေမှသာ အောင်မြင်တဲ့ထရိတ်ဒါတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်.
အင်ဒိုနီးရှားမှ Rosid ကတော့ သူမိသားစုကိုပိုမိုအလုပ်အကျွေးပြုနိုင်ဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် မိသားစုအတွက် နွားတစ်ကောင်လက်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ဆန္ဒပြုခဲ့ပါတယ်။
ကိုကျော်ခိုင်တစ်ယောက်ကတော့ သူ့ဘဝမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ဝင်ပြိုင်ဖူးတာဖြစ်ပြီး ကံကောင်းစေတဲ့ FBS ရွှေစင် ဒင်္ဂါပြားတစ်ပြားကို ဆုလက်ဆောင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။.
FBS အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ: https://my.fbs.com/registration
သင်၏ FBS ပရိုဖိုင်ကို Facebook သို့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ: https://fbs.com.mm/promo/dreams
ယခုပို့စ်အောက်ရှိကွန်းမန့်တွင် သင်လိုချင်တဲ့လက်ဆောင်နဲ့ ဘာကြောင့်လိုချင်ရတယ်ဆိုတာကိုပါရေးခဲ့ပေးလိုက်ပါ!